जर्मनी जाँदै गरेको अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिलाले आकाशमै जन्माईन बच्चा। अब त्यो बच्चा कुन देशका नागरिक बन्छन् ? – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / जर्मनी जाँदै गरेको अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिलाले आकाशमै जन्माईन बच्चा। अब त्यो बच्चा कुन देशका नागरिक बन्छन् ?
admin4weeks ago अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 99 Views
काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट जर्मनी जाँदै गरेको अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिलाले बच्चा जन्माएकी छिन् ।
आइतबार, यूएस एयर मोबिलिटी कमाण्डले ट्विटरमा एउटा थ्रेड पोष्ट गर्दै भन्यो कि ती महिला आफ्नो परिवार संग मध्य पूर्वबाट जर्मनी जाँदै थिइन्, तब उनले एउटा बच्चालाई जन्म दिइन् । जब महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थाल्यो, विमानको कमाण्डरले विमानमा हावाको चाप बढाउन तल उड्यो । त्यसले आमाको जीवन बचाउन मद्दत गर्‍यो र उनको अवस्था सुधार भयो ।
जब विमान अवतरण भयो, अमेरिकी सेनाका डाक्टरहरुले बच्चा जन्माउन मद्दत गरे । आमा र बच्चा दुवै खतरामुक्त छन् र नजिकैको अस्पतालमा लगिएको छ । यसलाई केही संयोगयुक्त घटना भनिएको छ । यस्ता घटनाहरु भएका छन् तर अत्यन्तै कम मात्र । यो खबर आएपछि जर्मनी गन्तव्य भएर उडेका कारण जर्मनी सरकारले उनलाई त्यही जन्मिएको बच्चा मान्ने बताएको छ ।
अन्य समाचारः दशा आफुलाइ जतिसुकै सबारे पनि, आफ्नो नामको अगाडी-पछाडी जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि, जस्तोसुकै सुविधा संग जिवन बिताए पनि, जिवनमा जतिसुकै उपलब्धि गरेपनि, हामीलाइ एउटा धृणित सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई राख्ने छ त्यो हो हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ । कारण के हुन सक्ला?
के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ। हाम्रा पहाडका नदीनालाहरु, सारा देशलाई उज्यालो पारेर, सबलाई खाना पकाई खुबाएर, घरघरमा यातायात पुगाएर, हरेक घरमा आधुनिक मशिनहरु चलाइ दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग बिजुलि निकाल्ने बिध्या छैन; हामी त्यसैले गरीब छौ।
यथार्थमा हामीलाई कंगाल बनाउने हाम्रो आफ्नो अप्रगतिशील समाजिक संरचनाहो, हाम्रो आफ्नो गलत धारणा हो, हाम्रो आफ्नो कुसंस्कार हो, हाम्रो आफ्नो आलशीपन हो, हाम्रो आफ्नो दुर्गतिशील बिचारधारा हो। हाम्रो भोतिक कंगालपन हाम्रो बैचारिक कंगालपनको प्रतिबिम्ब मात्र हो।हामी यति कंगाल छौ कि आफ्ना पुर्बजहरुले कमाईदिएको अमुल्य मणिलाई, नचिनेर ढुङगा सरह ठान्छौ। त्यसको ज्वलन्त उधाहरण हो “दशा”।
Previous फेसबुकले नाम परिवर्तन गरेपछि ट्विटरमा यस्तो मजाक !
Next कठै !बाबाले चाँडै बि र्सनु भयो भन्दै रु न्छिन् बिनिता,बुबाले दसैंमा समेत फोन न गर्नुको यस्तो रहेछ कारण (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं : पोर्चुगललाई पराजित गर्दै सर्बिया सन् २०२२ कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपमा स्थान पक्का …